Google Buzz VS Your Privacy ~ Nge Naing
Wednesday, February 17, 2010 ဒီရေ 10 comments
သူပြောထားတာ ကြိုက်တယ်... သတိထားရမယ်...
အခု လောလောဆယ်တော့ မပိတ်ရသေးဘူး... အခြေအနေကြည့်နေတယ်... ဟီဟိ
February 17, 2010 at 3:01 PM Reply
ဒီပို့စ်လေးအတွက် တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း Buzzကို ပထမဆုံး စတွေ့တဲ့နေ့ကတည်းက စိတ်ရှုပ်သွားတာ။ ဖျက်လို့ရမှန်းလည်း မသိတော့ ဘာလိုလုပ်ရပါ့ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတာ။ အခုလို နည်းလမ်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ အခုပဲ Buzzကို ပိတ်လိုက်ပြီ။ Thanks again!!!
February 17, 2010 at 3:22 PM Reply
Buzz ကို သူထွက်လာပြီး နာရီဝက်လောက်နေတာနဲ့ ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတယ်ထင်လို့။
February 17, 2010 at 3:59 PM Reply
ဒီပို့စ်လေးကို တင်ထားပေးတဲ့ မောင်လေးကိုဒီရေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်မတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းတာလည်း လို့ Google buzz ဆိုတာလေးကို Inbox နားမှာ ပေါ်နေတာ သတိထားမိပေမဲ့ တခါမှကိုဖွင့်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အခု ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရတာနဲ့ တခါတည်း Turn off လုပ်လိုက်ပြီ။
Read this before you turn off Buzz.
You can strict your privacy there.it is notamonster. We should Open your eyes widely and listen with both ears b4 you do something.Tech Giant like google will not do user harmful carelessly and dont be afraid too much after reading just this post.
February 17, 2010 at 11:10 PM Reply
ဟုတ်လားဗျ .. ကျနော်လည်း ပိတ်ရမယ် .. အဲလိုဆို မပိတ်မဖြစ်ကို ပိတ်ရမယ် .. အစကတည်းက ဘာမှန်းကို မသိတာ .. ခုတော့ သိသွားပြီ ... ကျေးဇူးပါပဲ။
February 18, 2010 at 2:01 AM Reply
turn off လုပ်ပြီးပါပြီ။
February 19, 2010 at 1:11 AM Reply
သူတို့ product ကို ကိုယ်က မဖြစ်မနေ သုံးနေရတာကိုးလေ။
February 23, 2010 at 12:54 AM Reply
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်တာတွေ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ်။ ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့သော ညီမအတွက်တော့ ဂျီမေးလ်အကောင့်ထဲ ကြည့်တောင်မကြည့်ရသေးပါ :D